SAWIRRO: Meydadka labo nin oo ka mid ahaa Raggii weeraray Hoteel Wehliye oo lagu arkay dhabarka dambe ee Hoteelkaasi |
SAWIRRO: Meydadka labo nin oo ka mid ahaa Raggii weeraray Hoteel Wehliye oo lagu arkay dhabarka dambe ee Hoteelkaasi
Sawiro saaka laga soo qaaday labadii Hoteel ee ciidamada Shabaab ay xalay weerarka ka geysteen ayaa muujinaya raadadkii ay reebeen Qaraxyada iyo dagaalkii sida tooska ah xalay uga socday Hoteeladaasi.
Inkastoo Xaalada guud ee Magaalada Muqdisho ay tahay mid degan, oo dhibaato aysan ka jirin, hadana waxaa muuqata raadadkii ay reebeen qaraxyadii iyo dagaaladii shalay maqribkii lagu qaaday labada Hoteel ee Siyaad iyo Wehliye oo ku kala yaalla Siyaad oo ku yaalla Madaxtooyada agteeda iyo Wehliye oo ku dhaw isgoyska Dabka.
Sawir qaadayaasha ayaa waxa ay soo sawireen meydadka labo ruux oo la sheegay inay yihiin raggii soo weeraray Hoteelka Wehliye ee Magaalada Muqdisho, kuwaasi oo meydkooda ay yaalleen qaybta dambe ee Hoteelka.
Dowladda Somalia ayaa sheegtay in la laayay dhamaan raggii soo weeraray labada Hoteel halka qaarkoodna ay is qarxiyeen.
Sidoo kale Hotelka Siyaad oo Khasaaraha ugu badan uu soo gaaray dhanka Burburka iyo hantida Hoteelka ayaa hortiisa waxaa ka socotay nadiifin iyo Uruurinta baabuurkii qarxay iyo darbiga Hoteelka ee dumay.
Shaqaalaha Nadaafada Dowladda hoose ee Xamar ayaa fulinaya, howshaan maadaama Hoteelkaan uu ku yaallo laamiga Madaxtooyada hormara, waxaa si deg deg ah loo soo celinaya bilicdii ay halkaan laheyd.
Ciidamada ammaanka Madaxtooyada ayaa feejignaan adag ku jira, sida caadiyan dhacda marka weerar uu dhaco ciidamada si aad ah ayeey u feejignaadaan maalmaha raadka weerarkaasi uu taagan yahay, kadibna ciidanka si caadi a ayeey ku soo noqdaan.
Al Shabaab ayaa sheegtay masuuliyada weerarada labadaan Hoteel xalay lagu qaaday ee Siyaad Hoteel iyo Wehliye Hoteel.